Tatoazy maingoka misy raozy: fanangonana endrika | Ny fanaovana tatoazy
Tatoazy maingoka misy raozy: fitambarana tsy nampoizina
Fernando Prada | 26/07/2021 09:49 | Tatoazy biby, Tatoazy voninkazo sy zavamaniry
Ao amin'ny tontolon'ny tombokavatsa dia misy andiana singa izay mitana ny teboka voalohany amin'ny filaharana ny endrika malaza indrindra ary takian'ireo fanadihadiana izay zaraina manerantany. ny tatoazy maingoka ary koa ny tombokavatsa raozy dia ohatra roa mazava amin'izany.
Inona izao no hitranga raha atambatra izy ireo? ny tatoazy maingoka misy raozy malaza kokoa noho ny antenainao izy ireo.
1 Ny dikan'ny tatoazy maingoka miaraka amin'ny raozy
2 Sarin'ny Tatoazy maingoka miaraka amin'ny raozy
Ny dikan'ny tatoazy maingoka miaraka amin'ny raozy
Fa andao atomboka amin'ny voalohany, inona no dikan'ny tombokavatsa maingoka? Any amin'ireo firenena voajanahary ity biby ity dia afaka mahita kolontsaina mitombo manodidina azy isika ary, noho izany, ara-dalàna ny fampidiran'ny fiarahamonina azy amin'ny angano sy angano. Noho izany, ny maingoka dia hita ho mariky ny fiarovana sy ny fahafatesana.
Amin'ny kolontsaina toa Egyptian ilay maingoka dia hita ho toy ny karazan-java-manan'aina izay nampiasa poizina, ankoatry ny zavatra hafa, ho fomba iray hahatonga ny vehivavy hiteraka. Tena nohajaina izy mandra-pahatongan'ny Isis tenany nanana maingoka roa toa mpiambina.
Raha ny maingoka dia biby manana fiampangana lalina an'ohatra noho ny fisehoany, ny fitondran-tenany ary ny toetrany; ny raozy dia iray amin'ireo voninkazo misy tatoazy indrindra eto an-tany. Ary izy koa dia misy dikany maro izay miovaova arakaraka ny lokon'ny felany. Ao amin'ity lahatsoratra ity manangona ny karazana tatoazy maingoka amin'ny raozy izahay.
Ao amin'ny Bodisma hitantsika ihany koa ny fanondroana an'io antroplopa a mariky ny fandriam-pahalemana fa fandrahonana na fanafihana fotsiny izy rehefa mahatsiaro loza.
Ny fahafantarana izany dia ara-dalàna ho an'ny olona manana tombokavatsa maingoka ny manana toetra miaro na "mpiambina" hikarakara ireo malemy sy tsy misy mpiaro. Na dia tsy azontsika atao aza ny manadino ny natioran'io ary afaka izany koa tandindon'ny fanaintainana na fahafatesana indrindra ho an'ireo be antitra, ankizy sy olona tsy salama.
Raha ny mahazatra, ny olona manao tatoazy maingoka (na aiza na aiza no itondrany azy) dia mazàna olona manirery mitady ny fombany na eo aza ny fanaintainana na ny manirery izay mety hitranga. Mampiavaka azy ireo ny maha-izy azy matanjaka sy mahaleo tena tsy manadino ireo manodidina azy.
Etsy ankilany, manana ny tombokavatsa raozy isika. Andao atombohy amin'ny fanazavana kely ny dikany; Mahaliana antsika rehetra ny raozy noho ny endriny sy ny fofony; dia tsara tarehy sy marefo fa ny tsilo dia mampahatsiahy antsika fa afaka ny ho izy ireo "Mampidi-doza" rehefa manindrona antsika izy ireo ary mahatonga antsika ho ra.
Azontsika atao ny mahatakatra ireo olona manao tombokavatsa amin'ny raozy, olona izany, tamin'ny fotoana iray tamin'ny fiainany, tsy maintsy "namorona" tsilo izy ireo mba hiarovan-tena amin'ny tontolo manodidina azy ireo. Saingy, indray mandeha dia matotra izy ireo ary rehefa «niroborobo izy ireo«, Nanjary raozy tsara tarehy izy ireo mahasarika antsika amin'ny hatsarana (anatiny sy ivelany), fofona, fomba fanao na fisainana, saingy tsy midika akory izany fa nandia toe-javatra sarotra tokoa izy ireo tamin'ny fiainany izay nanova azy ireo ho olona fantatsika miaraka amin'ny tsilo izay afaka manindrona antsika ary mampivoa-dra antsika.
Rehefa miresaka isika tatoazy maingoka misy raozy Izahay dia tsy miresaka manokana momba ny maingoka mifangaro amin'ny raozy, na dia marina aza fa tena miparitaka be io karazana endrika io. Betsaka ny olona miloka ovao ny maingoka mahazatra mba hisolo raozy azy. Amin'izany no hanesorantsika ny tena mampidi-doza sy tsy ampoizina amin'ny aterôpôpôdôro ary ampio ny hatsaran-tarehy sy ny sakafo matsiro manodidina ny raozy.
Ny olona manana maingoka maingoka amin'ny raozy eo amin'ilay toerana tokony hisy ny stinger dia matetika olona miaraka amin'ny olona falifaly sy akaiky toy ny raozy fa ahoana tsy hisalasala izy ireo hamoaka ny "tweezers" rehefa misavoritaka ny zavatra na mahatsapa fa ny olona manatona anao dia manao izany miafina na manisy ratsy na mitady tombotsoan-tena.
Ity fitambaran'ny tatoazy roa ity dia mampiseho fa olona afaka mitombo sy mivoatra ao anatin'ny tontolo iainana mahasosotra sy tsy tia mandray vahiny azontsika an-tsaina ary inona tsy noho izany dia tsy maintsy olona manana ratsy na mitady hanisy ratsy ny hafa, araka ny inoana matetika.
Andao hojerentsika ny hevitra sasany momba ny fomba ahafahantsika manao tatoazy ireo endrika ireo, na dia namela sary vitsivitsy taminao aza ireo hevitra momba ireo tatoazy ireo. Ireo mpampiasa izay nanisy tombokavatsa ny maingoka tamin'ny raozy, dia mazàna ao anatiny forearms na quadriceps. ny voalohany satria tsy faritra mampanaintaina izaitsizy ary aiza no azonao atao jereo tsara ny famolavolana tatoazy ary ny faharoa ho faritra midadasika be izay miaiky endrika lehibe kokoa sy feno tsipiriany.
Matetika ihany koa ny mahita maingoka miaraka amin'ny raozy samihafa izay mandravaka ny tatoazy na miaraka amin'ilay biby mihitsy. Ao amin'ny galeriana miaraka amin'ity lahatsoratra ity dia afaka jerentsika hoe inona no mety ho fahitana roa mety amin'ny vatan'olombelona. Raha tsy mampifangaro ireo singa roa isika dia tsy manova na manova ny dikany tany am-boalohany ny maingoka maingoka ary koa ny tombokavatsa raozy.
Raha fintinina, ny endrika sy faritra ho an'ny maingoka maingoka miaraka amin'ny raozy dia maro sy maro karazana, miankina amin'ny tsirairay ny manome izany fikasihana manokana izay hahatonga azy tanteraka hafa sy tsy manam-paharoa.
Sarin'ny Tatoazy maingoka miaraka amin'ny raozy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tatoazy biby » Tatoazy maingoka misy raozy: fitambarana tsy nampoizina
Tatoazy an-tendrombohitra, inona no dikan'izy ireo?
Tatoazy vehivavy Gypsy, endrika amam-panao malaza amin'ny fomban'ny sekoly taloha